Jotamu: Akatendeka Pasinei Nezvaiitika Mumhuri Mavo | Dzidzisai Vana Venyu
MWANA anogona kuomerwa noupenyu kana mubereki akarega kushumira Mwari wechokwadi, Jehovha. Ngatimbotaura nezvaJotamu. Tichadzidza nezvematambudziko aakasangana nawo mumhuri mavo paaikura.
Baba vaJotamu vainzi Uziya, vaiva mambo weJudha. Vaiva nemasimba kupfuura munhu wose munyika yacho. Uziya aiva mambo akanaka kwemakore akawanda, kunyange Jotamu asati atombozvarwa. Asi nokufamba kwenguva, Jotamu achiri muduku, Uziya akatanga kuzvikudza ndokutyora Mutemo waMwari. Saka Mwari akamuranga nechirwere chakaipa chemaperembudzi. Unoziva here kuti Jotamu akaita sei?— *
Jotamu akaramba achishumira Jehovha. Zvichida akabatsirwa naamai vake Jerusha. Asi zvinofanira kunge zvakanga zvakaomera Jotamu kuti arambe akatendeka kuna Jehovha pashure pokunge baba vake Uziya vadzingwa muimba yaJehovha.
Ko kana baba vako kana amai vakarega kunamata Jehovha? Izvozvo zvingaita kuti uomerwe noupenyu, handiti?—Asi hapana chakaipa nokufunga kuti izvozvo zvinogona kuitika. Mashoko akanyorwa naDhavhidhi muBhaibheri anotiratidza izvozvo.
Baba vaDhavhidhi vainzi Jese, vaiva munhu akanaka. Vaishumira Jehovha uye tinogona kuva nechokwadi chokuti Dhavhidhi aivada. Asi Dhavhidhi akazoda Jehovha kupfuura madiro aaiita Jese. Ngationei kuti nei tichidaro.
Tapota vhura Bhaibheri pana Pisarema 27:10. Dhavhidhi akanyora kuti: “Kunyange kana baba vangu naamai vangu vaizondisiya, Jehovha aizonditora.” Funga izvi: Zviri kurehwa neBhaibheri apa ndezvokuti kana baba vaDhavhidhi, Jese kana amai vake vaizorega kushumira Jehovha, Dhavhidhi aizoramba achimushumira.
Ko iwe? Ungaramba uchishumira Jehovha here kunyange kana baba vako kana amai vakarega?—Uyu mubvunzo wakanaka wokuzvibvunza. Nokuti une chokuita nemurayiro unonyanya kukosha muBhaibheri. Murayiro wacho unoti: “Ida Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose nepfungwa dzako dzose.”
Murayiro uyu unoreva kuti unofanira kuramba wakatendeka kuna Jehovha kunyange zvikaoma. Unofunga kuti ndiani anoda kuti tirege kushumira Jehovha?—NdiSatani Dhiyabhorosi muvengi waMwari. Jesu akamuti “mutongi wenyika ino.” Bhaibheri rinotiwo ndiye “mwari wemamiriro ezvinhu epanguva ino.” Tinofanira kutya Satani here?—
Aiwa. Pane kumutya, tinofanira kuyeuka kuti Jehovha ane simba rinopfuura raSatani nokure. Jehovha achatidzivirira kana tikavimba naye. Verenga uone muBhaibheri rako kuti Jehovha akadzivirira sei Dhavhidhi pazirume raityisa Goriyati. Jehovha anogona kukudzivirirawo kana ukaramba wakatendeka kwaari.
2 Makoronike 26:16-21; 27:1, 2
Johani 12:31; 2 VaKorinde 4:4
VaHebheru 13:5, 6
1 Samueri 17:41-54
^ ndima 4 Kana uchiverenga nemwana, kamutsetse ako kari kungokuyeuchidza kuti umbomira uye umukurudzire kuti ataurewo.